कारोना कोषलाई प्रदेश ५ का उद्योगीले दिए दुई लाख ५१ हजार - Aarthiknews
कारोना कोषलाई प्रदेश ५ का उद्योगीले दिए दुई लाख ५१ हजार
परासी । उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं ५ ले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको १० करोड रुपैयाँको कोषमा सो रकम उपलब्ध गराइएको महासङ्घ प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले जानकारी दिए । विपद्मा सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न व्यवसायी तयार रहेको उनको भनाई छ ।
कोषमा स्वेच्छिक सहयोग गर्न चाहानेका लागि प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बुटवल शाखाको खाता नं. ३१२०५०३०००३०१ मा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ । कोषमा हालसम्म प्रदेशका छ मन्त्रीले एक/एक महिनाको तलब उपलब्ध गराएका छन् ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतले ५१ हजार सहयोग गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि युनियनले उक्त रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । रासस
नक्कली बिलबिजक प्रयोगगरि ३६ करोड ८८ लाख बढी ठगी
नेपाल एपमार्फत दशैंमा घरजानका लागि ट्याक्सी बुकिङ्ग खुला